लेखकलाई पनि आइडल बनाऊँ: कृष्ण धरावासी
HOME » लेखकलाई पनि आइडल बनाऊँ: कृष्ण धरावासी
वासिङ्गटन डिसी संवाददाता
वासिङ्गटन डिसी । कृष्ण धरावासी नेपाली लेखकहरुको सूचिमा उपल्लो स्थान ओगट्न सफल नाम हो। राधा, शरणार्थी, टुंडाल, आधा बाटो, तल्लो बाटो लगायत थुप्रै उपन्यास र अन्यन्तै चर्चित नेपाली सिनेमा झोलाका लेखक धरावासीले राधा उपन्यासको लागि २०६२ मा मदन पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। पूर्ण कालिन लेखककोरुपमा अमेरिकामा बसेर उनले सन् २०१२ देखि हालसम्म कागजको मान्छे, रेड स्क्वाएर, ग्रेट फल्स, तल्लो बाटो, र लिलाबोध गरि ५ वटा पुस्तक प्रकाशन गरिसकेका छन्।
नेपाली भाषा साहित्यको विकास र विस्तार गर्ने उद्धेश्यले स्थापित नेपाल र नेपाल बाहिरका संघसंस्थाहरु बीच धरावासीले नेपाली साहित्यलाई ननेपाली समुदायमा पु¥याउनु पर्छ भन्ने विषयमा आवाज उठाइरहेका छन्। नेपाली साहित्यका उत्कृष्ट कृति छनौट गरि अंग्रेजी भाषामा उल्था गर्नु पर्छ । अनि मात्र अन्तराष्ट्रिय साहित्य जगतले नेपाली साहित्यको बारेमा थाहा पाउनसक्छ भन्ने कुरामा उनि जोड दिइरहन्छन् ।
उनी हरेक समय भन्ने गर्छन, ‘नेपाली भाषामा लेखिएका पुस्तक विदेशमा बसेर नेपालीले पढ्दैमा वा विदेशमा बसेका नेपालीले नेपाली भाषामा पुस्तक छपाउँदैमा त्यो अन्तराष्ट्रियकरण भएको मानिदैन।’
धरावासीले आफूले उठाएको विषयमा सम्वन्धित निकाय वा व्यक्तीहरुले पहल गरुन् भनेर धेरै घच्घच्याउने काम गरे । तर कतैबाट कुनै प्रकारको ठोस कदम चालेको नदेखेर हुनसक्छ, आफैं आगाडि बढे, गरेर देखाउन।
यसै सिलसिलामा नेपाली भाषाको अत्यन्त लोकप्रिय र मदन पुरस्कार प्राप्त ‘राधा’ उपन्यासलाई अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गराएर अमेरिकाबाट प्रकाशन गराए । सन् २०१७ को अन्त्य तिर Xlibris Corporation ले प्रकाशन गरेको सो पुस्तक हाल https://www.barnesandnoble.com/w/radha-krishna-dharabasi/1127626196?ean=9781543470109/ र
बाट खरिद गर्न सकिने गरि उपलब्ध छ।
राधाको सो अंग्रेजी भाषा संस्करण पुस्तकको हालै अमेरिकाको भर्जिनियामा नेपालका लागि अमेरिकाका राजदूत डा. अजुर्न कार्कीले विमोचन गरेका थिए । अनेसासको सर्वोत्कृष्ठ पुस्तक पुरस्कार वितरण तथा अनेसास भेलामा विमोचित पुस्तकका लेखक धरावासीले ‘गे्रट फल्स’ को लागि सर्वोत्कृष्ट पुस्तकको पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए ।
सो समारोहमा उनले अगं्रेजी भाषामा उल्था गरेर प्रकाशन गरिएको राधा उपन्यासको बारेमा बोल्दै भने, ‘ नेपाली साहित्यलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने हो भने नेपाली साहित्यका उत्कृष्ट कृतिहरु छनौट गरि अंग्रेजी भाषामा उल्था गर्दै प्रकाशन गर्ने र त्यसलाई व्यापक गराउने काम संस्थागतरुपमा नै गर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी अंग्रेजी भाषामा अनुवादित नेपाली सहित्यका उत्कृष्ठ सिर्जनाहरुलाई विश्वभर छरिएर रहेका हरेक नेपालीले आफ्ना विद्यालय तथा कलेजहरु, साथीहरु तथा काम गर्ने ठाउँमा समेत जानकारी गराउने हो भने विस्तार विस्तार ननेपाली समुदायमा सजिलै नेपाली साहित्यले प्रवेश पाउने छ ।’
‘विदेशमा जन्मेका वा सानै उमेरमा विदेश आएका दोश्रो पुस्ताले नेपाली लेख्न पढ्न जान्दैन तर अंग्रेजी जान्ने भएकोले विदेशमा बसेका हरेक नेपाली आफैंलाइ पनि यसरी अनुवादित पुस्तक काम लाग्न सक्छन् ।’ उनले भने । विदेशी प्रतियोगिताहरुमा नेपाली सहभागिहरुलाई ‘आइडल’ बनाउन जसरी हामी नेपालीहरु लागि पर्छौ, त्यसैगरि लेखकहरुका यसरी अनुवादित पुस्तकहरु खरिद गरेर, ननेपाली समुदायमा पु¥याउन सहयोग गरेर वा अंग्रेजी भाषाका संचार माध्यमहरुमा पु¥याएर नेपाली लेखकहरुलाई पनि आइडल बनाउन सकिन्छ भन्ने धरावासीको भनाइ रहेको थियो।
धरावासीले नेपाली साहित्यका उत्कृष्ट श्रष्टाका उत्कृष्ट सिर्जनाहरु सबैलाई आइडियल बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएका छन्। यसै कुरालाई उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा थप व्याख्या गरेका छन् अंग्रेजी भाषा भन्दा विश्वका अन्य धेरै भाषामा लेखिएका पुस्तकहरु र लेखकहरु आइडियल बन्न सकेका छन् । नेपाली साहित्यमा पनि सो वा सो भन्दा माथिल्ला स्तरका सिर्जनाहरु भएकोले हामी पनि सक्छौँ भन्ने आशय व्यक्त गरेका छन्।
धरावासीको फेसबुक पेजमा प्रकाशित स्टाटस जस्ताको त्यस्तै
नेपाली साहित्यको अन्तर्राष्ट्रियकरणको अभियान अन्तर्गत पहिलो पल्ट नेपाली भाषाको अत्यन्त लोकप्रिय र २०६२ सालमा मदन पुरस्कार प्राप्त उपन्यास राधालाई अङ्ग्रेजीमा अनुबाद गरी अमेरिकी प्रकाशनबाट छापेर विश्व बजारमा पठाइएको छ। यस अघि पनि फाट्टफुट्ट नेपाली किताबहरू अङ्ग्रेजीमा अनुबाद भई छापिएका भए पनि तिनीहरू विश्वभरि सबैकालागि सहजै उपलब्ध हुनसक्ने प्रबिधिमा प्रवेश गर्न सकेका थिएनन् । यो किताब खास गरि डायस्पोरामा छरिएर रहेका दोस्रो पुस्ताका नेपाली पाठकहरू जो अब देवनागरी लिपिमा किताब पढ्न असजिलो मान्छन्, उनीहरू र ननेपाली पाठकहरूलाई पनि नेपाली साहित्य पढाउने उद्देश्यद्वारा प्रेरित भई ल्याइएको हो । नेपाली साहित्यको स्तरीयतामा अब कुनै अलमल छैन तर यसलाई विभाषीहरू माझ पुर्याउन नसकेकाले हाम्रो साहित्य आफैभित्र संकुचित हएर बसेको छ र हामी लेखकहरू पनि स्तरियताको हिन ग्रन्थीले ग्रस्त छौं। अबको संसार प्रत्येक मानिसको हत्केलामा आएर खुम्चिएको छ। आज कुनै मानिस पनि आफ्नो सूचना सम्प्रेषण गर्न नसक्ने गरि कुण्ठित हुनु नपर्ने युगमा छ । सूचनाको यो खुल्ला संसारमा हाम्रो साहित्यलाई हामीले नै एउटा सीमामा मात्र कुण्ठित गर्नु नहुने बेला भएको छ।
के नेपाली साहित्य थोरै मानिसले बोल्ने र बुझ्ने भाषामा लेखिएको नभएर यसको स्तरमाथि प्रश्न छ? रवीन्द्रनाथ ठाकुरको गीताञ्जली बंगाली भाषामै सिमित भएको भए आज पनि त्यो राम्रा भजनहरूको संग्रहको रूपमा मात्र चिनिने थियो । सानो देशका थोरै मानिसहरूले बोल्ने भाषामा राम्रो साहित्य हुदैन भन्न सकिदैन तर त्यसको जँच त्यही भाषाका मानिसले मात्र पनि गर्न सक्दैनन् ।
अबको युग प्रत्येक कुरालाई विश्वबजारमा लगेर नाप्ने युग हो । यसबाट हामी मात्र पछि किन बस्ने । रहर पुर्याउन मात्र आफ्ना कृतिहरूलाई अनुबाद गरि सिमित क्षेत्रमा वितरण गरेर अब हाम्रो साहित्य विश्वबजारमा पुग्न सक्दैन ।
त्यसैले पहिलो पल्ट राधा विशेष अभियानका साथ यहाँहरूका हत्केलामा आइपुगेको छ । अमाजोन डट कम र बान्स एण्ड नोबलबाट विश्व भरि घर घरमै यो किन्न सकिन्छ ।
विश्वभरि छरिएर रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली मूलका स्वजनहरूसंग म नम्र निवेदन गर्दछु- यो पुस्तकलाई अन्तर्राष्ट्रिय पाठक सामु पुर्याउन पहिलो सहयोग हजुरहरूकै हो । यहाँहरूले आफ्नो साहित्यको माया गर्दै अरू बिभाषी माझ पनि पुर्याउन सके हाम्रो सामुहिक प्रतिनिधित्व हुनेछ । आफ्ना नानीहरूलाई पढ्न दिएर उनीहरूको मद्दतबाट कलेज र विश्वविद्यालयसम्म यसको प्रचार गर्न सकिन्छ । आफन्तजन र मित्रहरूलाई विभिन्न उपलक्ष्यमा उपहार दिन सकिन्छ । आफ्ना पहुच भएका संचार माध्यमहरूमा चर्चा गर्न सकिन्छ ।
हामीले समय समयमा कलाकार र खेलाडीहरूलाई ठूलो सम्मान र स्थापना हुन सयौं डलर खर्च गरेर भोट हाली आइडल पनि बनाउँदै आएका छौं । त्यसरी आइडल बनिएका कलाकारहरूले आज संसार भरी आफ्नो कला देखाइरहेका छन् र नेपालीलाई विश्व भरी चिनाइरहेका छन् । खेलाडीहरूले पनि देशको सिमाना नाघेर देशलाई चिनाइरहेका छन् । विदेशी सेनामा जागिर खाएर पनि नेपाली बहादुर लडाकुका रूपमा चिनिएका छौं तर आजसम्म पनि नेपाली साहित्यलाई भने विश्व सामु पुर्याउन सकिएको छैन ।
हामीलाई संसारमा चिन्नेहरूले सगरमाथाको देश भनेर चिन्छन् जो प्राकृतिक हो हामीले बनाएको होइन । बुद्धको नामले चिन्छन् जो नेपाल देश बन्नु भन्दा बाइस सय बर्ष अघि यस भूगोलमा जन्मिएका थिए । इतिहास र भूगोलका केही बिम्बहरूले चिनिएका हामीले आजको विश्व प्रतिष्पर्धामा आजकै पाराले नछिरी अब नहुने भएको छ ।
संसारमा सबै लेखकले आफ्नै भाषामा लेख्छन् तर त्यसलाई अनुबाद गरेरै संसारमा पुर्याइन्छ । आजसम्म नोवल पुर्कार पाउने पुस्तकहरूको सूचि हेरियो भने गैर अङ्रेजी भाषाकै कृतिहरूको लस्कर लामो देखिन्छ । ओस्कर प्रतिष्पर्धासम्म हाम्रा फिल्म गए, ओलम्पिकसम्म हाम्रा खेलाडीहरू पुगे । हाम्रा कृतिहरू नराम्रै भएका कारण आजसम्म आफ्नो भाषाबाट बाहिर ननिस्किएका हुन् त !
संसारमा छरिएर रहेका हामीहरू आज को को कहाँ कहाँ बसेर के के गरिरहेका छौं त्यो सबैलाई थाहा हुने कुरा होइन । त्यसैले अब हामीले आफ्ना कामहरूको बारेमा आफैले जानकारी दिनै पर्छ ।
म विगत पाँच बर्षदेखि अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यमा बस्दै पूर्णकालिन लेखकको रूपमा काम गरिरहेको छु । हरेक बर्ष जस्तो नयाँ किताब सार्वजनिक गरिरहेकै छु । अमेरिका आए पछि मैले बल्ल थाहा पाए हामी नेपाली लेखकहरूको विश्वमा बुझिने र पढिने भाषामा शुन्य उपस्थिति रहेछ । नेपालमा रहदा मदन पुरस्कार प्राप्त प्रतिभिका रूपमा चिनिएर के के न भइयो भन्ने आत्मप्रशंसाले ग्रसित म देशको सीमा नाघिसक्दा केही पनि थिइन । मैले यहाँ देवकोटा, सम, लेखनाथ, शंकर लामिछाने, भैरव अर्याल, भुपि सेरचन, मोहन कोइलाला, बैरागी काइला, इन्द्रबहादुर राई कसैलाई पनि कतै भेटिन । पुस्तकालयमा हजारौ किताबका बीच एउटा पनि नेपाली लेखकलाई भेटिन । जब कुनै लेखकसंग परिचय हुन्थ्यो उसले मसंग मेरो कुनै किताब कहाँ किन्न वा पढ्न पाइन्छ भनी सोध्थ्यो मसंग त्यसको कुनै उत्तर थिएन । उसले नेपाली साहित्य बारे जान्न खोज्दा तिनलाई देखाउने मसंग केही थिएन। अमेरिकाका धेरै विश्वविद्यालयहरूमा दक्षिण एशियाली साहित्य पढाई हुदो रहेछ तर त्यहाँ अधिकांश भारतीय लेखकहरू नै पढाइदा रहेछन्। देशको सिमाना काटिसक्दा म शरीर र पहिचान दुबैमा लिलिपुट भइसकेको थिए । अनि बिस्तारै थाहा पाउँदै गए यो लिलिपुट ममात्र होइन अधिकांश नेपालीहरू कै अवस्था उस्तै रहेछ ।
अनि आफू जे गरिन्छ त्यसैबाट आफू र देशलाई चिनाउनु पर्छ भन्ने लागेर लामो सोचाई पछि राधा उपन्यासलाई अनुबाद गर्न मन लाग्यो । बहु पठित, चर्चित र पुरस्कृत कृतिबाटै यो यात्राको थालनी गर्ने सोची महेश पौडेलजीको सहयोगबाट राधाको अनुबाद सम्भव भयो । आज यो यहाँहरू सबैको हत्केलामा आइ केको छ । यसलाई किनेर, पढेर, पढाएर, उपहार दिएर, ज सम्भव हुन्छ सहयोग गरि मेरो माध्यमबाट शुरू गरिएको नेपाली साहित्यको अन्तर्राष्ट्रिय यो अभियानमा सहभागी भई दिनु हुन अनुरोध गर्दछु। (Make writer Idol ) लेखकलाई पनि आइडल बनाउँ । एउटा एउटा किताब किनि दिए लेखक स्वत्त आइडल बन्छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजार गुमाउँदै वायुसेवा निगम